Metro Route 120 RapidRide H ta'uufi deemaa!
Gamtaa King County Metro waliin uumuudhaan daandii Delridge Way SW irra deebiin ijaaruufi. Akkasumas, Toora RapidRide H haala imala lafootii fi saayikilii ofuuf mijatuun fooyyessuuf ni hojjanna.
Ji'oota darbanitti waantonni hedduun Kibba Seattletti akka jijjiiraman ni hubanna. Ammas imalli fooyya'aan akka jiraatuuf daandiiwwan miidhaman fooyyessuun hojjachuudhaan Kibbi Seattle fuulduratti akka tarkaanfattuuf ni hojjanna. Baay'ina konkolaataafi geejibaa dabaluudhaan dura, daandiiwwan geejibaafi imalaa irra deebiin ijaaruun barbaachisaadha. Kanaafis jecha daandii Delridge Way SW ijaaruuf kan hojjataa jirru.
Ji'a Bonaa Waxabajjii kanatti, ollaa keessanitti daandiiwwan miidhaman deebisnee ijaarra, imalaaf akka mijatutti ni fooyyessina, akkasumas mallattoowwan toora imala konkolaataa haala barbaachisuun itti dabaluuf hojjataa jirra. Toorri konkolaataa baasii RapidRide H inni haaraan bara xumura 2021tti hojii kan jalqabu yoo ta'u, ijaarsi guutuun bara 2022tti ni xumurama.
Dizaayiniin keenya kan daandii Delridge Way SW kanneen qabu keessaa:
Daandii konkolaattota dura gahan dhaabsisuuf oolu
Mallattoo baasii yeroo ibsaan diimaan ifu fuuladuratti akka darbuuf agarsiisu
Toora qoodiinsa haala tiraafikaa agarsiisu haaraa
Qophii aartii haaraa bakka ummanni itti keessummaa’u yookan taa’uf tajaajilu
Daandii imala dheeraafi suuta deemamuuf oolu
Ujummoowwan bishaan dhugaatiifi balfa dhabamsiisan
Daandiiwwan saayikilii ofuuf oolaniifi eegaman, bakka nammoonni lafoo itti qaxxaamuran, mallattoowwan imala saayikilii, toorawwa walqunnamsiistuu ollaa, ibsaa namoota miillan deemaniif, karaawwan namoonni miillaafi saayikiliin deeman kara konkolaataatti itti bayan haaraa
Diizaayinii haaraa bakka konkolaataa dhaabuufi konkolaattota haaraafi saayikiloota keessummeessuu dandeessisu
Ibsa yeroo konkolaataan bakkeewwan eeramanitti dhaabuun hin danda’amne ibsan, haala baay’ina konkolaataa ilaalcha keesa galcheen ibsu
Waa’ee pirojaktichaa caalmaatti baruufi ijaarsicha booda waantota eeggaman asitti argattu.
Waantota yaaddan nuuf qoodaa
1. Wanti nuti isinirraa eegnu – keessumaayyuu jiraattonni, hojjattoonni, yookan kanneen daandii Delridge Way SW irra imaltan – har’arraa kaasee ijaarsa guddaaf akka of qopheessitanii dha. Ijaarsichi hojii pirojaktii ijaarsaa 35th Ave SW/ SW waliin kan walfakkaatudha. Dhimma isin yaaddessu yookan fedhii qabdan yoo nuuf qooduu barbaaddan, maaloo bakka kanaan gadiitti nuuf qooda.
Jiraataa yookan ollaa daandii Delridge Way SW yoo taatan, haala ijaarsichi irra jiru irratti odeeffannoo yeroo yeroon afaan keessaniin ni barbaadduu?
2. Yeroo ijaarsichaatti dhiibbaan isin irratti akka hin uumamneef ni barbaanna. Jiraataa cinaa Delridge Way SW yoo taatan, maaloo hojiichi akka jiraatu fi isin biratti akka gaggeeffamu hubadhaa. Hojicha kaanaan yeroo tokko tokko imalli keessan ugguramuu, imalli bitaa mirgaa cufamuu, yookan immoo halkan kan hojjatamu ta’uu danda’a. Maaloo, saanduqa kanaan gadiitiin maqaa keessan, teessoo keessan, teessoo email, fi afaan ittiin isin akka qaqqabuuf barbaaddan ibsuudhaan yoo nuuf ergitan haala ijaarsichi irra jiru jala jalaa isiniif erguu ni dandeenya.